China Drive Na ogbe rụpụta na Factory | Huade
Mbanye na racks na-eji oke nke oghere na vetikal site na iwepu ụzọ ọrụ maka ụgbọala forklift n'etiti racks, forklifts na-abanye n'okporo ụzọ nchekwa nke ụgbọala-na racks iji chekwaa ma weghachite pallets. Ya mere ewepụ aisles na-echekwa ọtụtụ ohere dị. Nke a na usoro dabara dịruru ná njọ ebe ohere itinye n'ọrụ bụ ihe dị mkpa karịa selectivity nke echekwara na ngwaahịa, ọ bụ ezigbo maka na ịchekwa nnukwu nke homogeneous palletized ngwongwo, na okwu ọzọ, a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke yiri ihe.
A na-etinye pallets ndị ahụ n'otu n'otu n'otu okporo ụzọ abụọ n'okporo ụzọ ahụ, na-ebute usoro edozi maka ịkwado na buru, e nwere ụdị ụdị racks abụọ dị, na-abanye ma na-ebugharị.
Drivegbọala na ogbe
Forklift nwere ike ịkwọ ụgbọala naanị n'otu akụkụ nke ụzọ mgbapụta, pallet ikpeazụ bụ nke mbụ pallet. Typedị ogbe a bụ echiche maka ịchekwa ihe na obere ntụgharị.
Gbọala site na ogbe
Forklift nwere ike ịbubata n'akụkụ abụọ nke okporo ụzọ (n'ihu na azụ), pallet mbụ bụ nke mbụ pallet. Typedị ogbe a kacha mma tinye n'ọrụ nchekwa ntụgharị dị elu.
Ebe ọ bụ na ndị na-agba ụgbọ mmiri na-agba n'okporo ụzọ, a ga-atụle mgbochi mmegide na nhazi nke ihe ngwọta, ọ na-abụkarị ọdụ ụgbọ ala iji chebe ihe ndị ahụ na-eduzi gwongworo forklift, a na-ese ihe ndị ahụ dị elu na nnukwu visibiliti, na pallets nwere agba na-egbuke egbuke akwadoro ka ndị na-arụ ọrụ dochie ma weghachite pallets ahụ ọsịsọ.
Jirichaa itinye n'ọrụ nke ala oghere
Wepụ wara wara na-enweghị isi
Ọ dị mfe ịgbatị maka mgbanwe kachasị
Zuru okè maka nnukwu ọnụọgụ ngwaahịa dị iche iche
FIFO / LIFO maka nhọrọ, ezigbo maka oge nkwakọba ihe
Nchekwa na-eji ire ụtọ nchekwa nke nsogbu-enwe mmetụta ọsọ ọsọ ngwaahịa
A na-ejikarị ya eme ihe na nchekwa oyi n'ihi oke ohere itinye n'ọrụ ịchekwa ụgwọ nke njikwa okpomọkụ
Nke gara aga: Akwa Carton Flow Rack